Electrical Wire Electrical Cable - BaganMart
ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ Wire Cables
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 1421 view counts
Brand : R & B
Model : UL1015 12AWG 600V
လုပျငနျးအမညျ : MMB Co.,Ltd Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 09-73137744,09-73080480
.Conductor Type : Stranded
Color : Black/Blue/Brown/White
Rated voltage : 300V or 600V
Related temperature : 80 ºC or 105ºC
Tinned or bare, stranded or solid copper conductor,Insulation: PVC.Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting. Wiring in all installations where fire safety is of utmost importance like schools, theatres, commercial complexes, apartments, high rise buildings, laboratories, etc.Passed UL VW-1 flame test.For internal wiring of electronic and electrical equipment.
အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အဆင့်မြင့် နည်းပညာများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော အကောင်းဆုံးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံး ဝါယာကြိုးများ ဖြစ်ပါသည်။အိမ်သုံး၊စက်ရုံသုံး၊ရုံးသုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့ကို လူကြီးမင်းများစိတ်တိုင်းကျ ကျွန်တော်များ MMB Electric တွင် ချိုသာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
MMB Electric Co.,Ltd ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်ဆုံးနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ
ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော Electrical Products များကို ချိုသာသောဈေးနှုန်းဖြင့် လက်လီလက်ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပါသည်။
MCB Box / Consumer Box
For Electrical Wire Electrical Cable
May I get the quotation for "Electrical Wire Electrical Cable" ?